Warbixin ku saabsan sida qarsoodiga ah oo ay ciidamada Maraykanka uga howlgalaan Soomaaliya – Xeernews24
Warbixin ku saabsan sida qarsoodiga ah oo ay ciidamada Maraykanka uga howlgalaan Soomaaliya
19. Oktober 2016 /in Qormooyin/Articles /von admin
October 19 (XeerNews24)
Dowlada uu madaxda ka yahay Obama ayaa kordhisay dagaalada sida qarsoon ay ugaga wado dalka Soomaaliya sanadkan,iyagoo isticmaalaya ciidamada sida gaarka ah u tababaran, duqeyn iyo weliba ciidamada Midowga Afrika ka socda ee dagaalka kula jira ururka Alshabaab ee dalka Soomaaliya.
Sida ay daabacday jariirada New York Times boqolaal ciidamo Maraykan ah ayaa ku sugan deegaano badan oo dalka Soomaaliya ka mid ah iyadoo ay ciidamadaas yihiin kuwii ugu badnaa tan iyo weerarkii ay ugaga dhinteen ciidamada Maraykanka ah 18 askari dagaalkii la magac baxay “Black Hawk Down” sanadkii 1993dii.
Ololaha uu Maraykanka hadda ka wado dalka Soomaaliya ayay sida ay sheegeen qubaro Maraykan ah iyo madax Afrikaan ah waxa ay tahay in laga fogaado inaysan dib u soo noqon masiibadii ku habsatay ciidamada Maraykanka ku qabsatay magaalada Muqdisho 1993dii.
Hase ahaatee qorshahan ayaa halistiisa leh, waxaana ka mid ah in ay waxyeelo soo gaarto ciidamo badan oo Maraykan ah, duqeyn si qalad ah loo qaado taasoo dad badan oo rayid ah waxyeelo ka soo gaarto iyo in weliba Maraykanku uu ku sii talax tago dal ay dhibaato badan ka jirto.
Ololaha ka socda Soomaaliya waa qorshe dagaal oo uu Madaxweyne Obama dejiyay taasoo la aaminsan yahay inuu sii wadi doono madaxweynaha bedelaya. Waana qaabka uu Maraykanku uu ugaga howlgalo Bariga Dhexe,Waqooyiga Afrika, Siiriya illaa iyo Libya. Inkastoo uu Obama sheegay in uu ka fogaanayo in ciidamada Maraykanka ay si toos ah ugu lug yeeshaan dagaalada ayaa hase ahaatee sanadkan kaliya waxa uu Maraykanku ku qaaday duqeyn toddobo dal waxana howlgalo gaar ah laga fuliyay dalal intaa kasii badan.
Mas’uuliyiin Maraykan ah ayaa sheegtay in Aqalka Cad uu si hoose u ballaariyay awooda uu u leeyahay Madaxweyne Obama in uu ciidamo Maraykan ah ay duqeyn ka geystaan Soomaaliya si ay u ilaaliyaan ciidamada Midowga Afrika ee dagaalka kula jira ururka Alshabaab ee gacan saarka la leh Alqaacida.
Marka ay si cad uga hadlayaan arrimaha dalka Soomaaliya waxa ay wasaarada gaashaandhigga Maraykanka sheegtaa in howlgalada ay ciidamada Maraykanka fuliyaan ay yihiin kuwo ay isku difaacayaan.Dowrka Maraykanka uu ku leeyahay dalka Soomaaliya ayaa ah mid sii kordhaysa iyadoo ururka Alshabaabna ay sii kordhiyeen weerarada ay geysanayaan.
Kooxda Alshabaab waxa ay weeraro ku qaadeen saldhigyo boolis,waxa ay qaraxyo ka geysteen baarar ku yaal xeebaha,waxay dileen Generalo ka tirsan ciidamada Soomaalida waxana ay weeraro ku qaadayaan saldhigyada ciidamada AMISOM sida kii bishii January ay ku qaadeen ciidamada Kenya halkaa oo inkabadan boqol ciidamada Kenya ah lagu diley hub badana ay hore u sii qaateen.
Tiro u dhaxeysa 200 illaa iyo 300 oo ah ciidamada sida gaarka ah u tababaran oo Maraykan ah ayaa howlgalo la fuliya ciidamada Soomaaliya iyo ciidamada kale ee ka mid ah AMISOM sida ciidamada Kenya iyo Uganda iyagoo illaa iyo lix weerar ay qaadaan bil walba sida laga soo xigtey sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Milatariga Maraykanka. Howlgaladan ayaa ah kuwo ka kooban weerar dhulka ah iyo mid kale oo ah duqeyn ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska.Ciidamada gaarka ah ee SEAL, kooxda 6aad ayaa si weyn ugu lug leh howlgaladan laga wado dalka Soomaaliya.
Marka howlgalada dhulka ah ay soo dhamaadaan ciidamada Maraykanka ee la shaqeeya kuwa Soomaalida waxa ay su’aalo ku weydiiyaan maxaabiista goobo gaar ah sida goob ku taal Puntland kahor inta aan maxaabiista loo gudbin xabsiyo ay Soomaalidu maamulaan sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada Milatariga Maraykanka.
La Soco Qeybta 2aad goor dhow.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2016/10/soldat-usa.jpg 198 254 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2016-10-19 22:11:222016-10-19 22:11:22Warbixin ku saabsan sida qarsoodiga ah oo ay ciidamada Maraykanka uga howlgalaan Soomaaliya
Maamullada Puntland iyo Galmudug oo beeniyay in Itoobiya ay heshiisiisay Tirada qarsoodiga ah ee Ciidamadda Mareykanka ee Soomaaliya ku sugan oo la ogaaday...